Into ekugqibeleni endifuna ukuyibonisa namhlanje nguKeepa. Ithuluzi elilandelekayo lokulandelela ixabiso lama-Amazon elilula. Isicatshulwa esicocekileyo nesicacileyo sichaze ngokucacileyo. Nangona kunjalo, ndivumele ukuluhlu lwezinto eziphambili ezithembiswa yi-Keepa software software - ubuncinane ngenxa yokuphelela. Phakathi kwamanye, eli lixabiso lomthengisi lingakunceda ngemagrafu yeembali ezibandakanyekayo kwindlela ephathekayo ngokufanelekileyo, izilumkiso zexesha langempela kwixabiso lokunyuka / ukuphakama nokuguqulwa kwezinto ezikhoyo, ukujonga okulula kufumaneka ngokuthe ngqo ngokukhawuleza kwesibrowser, kunye umsebenzi wokujonga ngokukhawuleza, ukubona ama-intanethi amava apha kwi-Amazon kwaye uthelekisa amaxabiso angaphantsi kwexesha.